China Lab-ukusetshenziswa Fluidized-embhedeni Jet Mill For 1-10kg Umthamo ifektri abakhiqizi | Qiangdi
Umbhede we-Fididized-bed Jet Mill
QDF-400 WP Okuqhubekayo Production System Of Jet Mill For 400kg
Uhlelo lweJet Mill WP – Faka isicelo ku-Agrochemical Field
Uhlelo lwe-WP-WDG – Faka isicelo ku-Agrochemical Field
Uhlobo oludumile lwe-Jet Mill
I-JMP Mill yombhede wombhede we-GMP FDA
Ukusetshenziswa Okukhethekile Kwe-Jet Mill Yombhede we-Fluidized In Hardness Materials
Imboni Yebhethri Nokunye Ukusetshenziswa Kwamakhemikhali Okusebenzisa iJet Mill
Uhlelo lwe-Nitrogen Protection Jet Mill Lwezinto Ezikhethekile
Ubulukhuni High Izinto Jet Mill
Uhlobo lwe-Disc (UltrasonicPancake) Jet Mill
Uhlobo Lwe-Disc Jet Mill
Laboratory Sebenzisa Jet Mill
I-Lab-use Fluidized-bed Jet Mill ye-1-10kg Amandla
Lab-ukusetshenziswa Disc-uhlobo jet isigayo QDB-50 QDB-100 QDB-150
IJet Micron Grader Yokuhlunga
Izingxenye zeJet Mill
Izingxenye zeJet Mil
I-LSM Vertical Wet Stretring Mill
Icala Lobunjiniyela elihlobene
Izinzuzo Zethu Futhi Ngemuva Kokuthengisa
IJet Mill esetshenziswe kuLab, umgomo wayo osuselwa kumthetho wombhede ophuzwayo iJet Mill iyithuluzi elinjengokusebenzisa ukugeleza komoya okunesivinini esikhulu ukwenza uhlobo olomile lwensimbi olucolekile. Izinhlamvu ziyasheshiswa ekushayweni komoya okushesha kakhulu.
Jet isigayo main umshini isakhiwo umdwebo
Izinto zokwakha zizogaywa phansi ngokusheshiswa ukuthinteka futhi zishayisane kaningi phakathi kokuhamba komoya okunesivinini esikhulu. Izinto ezenziwe ngofulawa zihlukaniswa yisondo lokulinganisa futhi izinhlayiya ezidingekayo ziyahlukaniswa bese ziqoqwa yiSiphepho Isihlukanisi noMqoqi, Izinto zokwakha ezibukhali zibuyiselwa egumbini lokugaya ukuze ziqhutshwe ngokuqhubekayo zize zifinyelele kusayizi odingekayo.
1.Mainly Low low demand, 0. 5-10kg / h, fit to be used in Lab.
Le yunithi yakhelwe njengesakhiwo sangaphakathi esihlanganisiwe ukwenza imishini yokugaya ivaliwe.
Akukho ukushisa kwamazinga okushisa, umsindo ophansi weyunithi, akukho ukungcola, imfucuza ephansi ngesikhathi sokugaya.
Ubukhulu be-4.Small, ukuma okuhlangene, okulungele ukusetshenziswa kuLab. Uhlelo lusebenzisa ukulawula okuhlakaniphile kwesikrini sokuthinta, ukusebenza okulula nokulawula okunembile.
5.Ngobufakazi obuhle bomoya, qinisekisa indawo ehlanzekile. Ukusebenza okulula nokugcinwa, ukusebenza kwemishini ezenzakalelayo.
6. Ububanzi bokubamba obubanzi:ukucoleka okuchobozayo kwento kungalawulwa ngokulungisa ijubane lokujikeleza kwamasondo wokulinganisa kanye nohlelo. Ngokuvamile, ingafinyelela d = 2 ～ 15μm
7. Ukusetshenziswa kwamandla okuphansi:Ingonga amandla angama-30% ～ 40% uma kuqhathaniswa namanye ama-pulverizer womoya womoya.
8. Ukugqoka okuphansi: Ngoba umphumela wokuchotshozwa ubangelwa umthelela nokushayisana kwezinhlayiya, izinhlayiya ezinejubane azivamile ukushaya udonga. Kusebenza ekuchobozeni izinto ezingezansi kukaMoh's Scale 9.
Isetshenziswa kabanzi ekuncibilikeni okuncomekayo kwama-ores angenasici, amakhemikhali okusansimbi, imithi yasentshonalanga, imithi yendabuko yamaShayina, amakhemikhali ezolimo nobumba, afanele ukusetshenziswa kuLab.
Ishadi lokugeleza lombhede we-Fluidized-bed Jet Mill
Ishadi lokugeleza lisebenza ngokugaya okujwayelekile, futhi lingalungiswa kumakhasimende.
Umklamo Wemininingwane Yomshini
1. Isakhiwo silula, sinembobo yokuwasha, kulula ukuyihlanza
2. Motor nge cap ukugwema powder ukudla
3. Isakhiwo esihlangene: ukuhlala komhlaba kuncane
Isevisi yangaphambi kwesikhathi:
Yenza njengomeluleki omuhle nomsizi wamakhasimende ukuze akwazi ukuthola inzuzo ecebile nephanayo ekutshalweni kwabo.
1. Yethula umkhiqizo kumakhasimende ngokuningiliziwe, phendula umbuzo ophakanyiswe yikhasimende ngokucophelela;
2. Yenza izinhlelo zokuzikhethela ngokuya ngezidingo nezidingo ezikhethekile zabasebenzisi emikhakheni ehlukene;
3. Ukusekelwa kokuhlolwa kwesampula.
4. Buka ifektri yethu.
1. Ngokuqinile ukuhambisana nohlelo lokuphathwa kwekhwalithi le-ISO9001-2000;
2. Ukulawulwa okuqinile kusuka ekuhlolweni kokuthenga, ukuhlolwa kwenqubo kuya ekuhlolweni kokugcina;
3. Kusungulwe iminyango eminingi ye-QC ukwenza imigomo yokulawulwa kwekhwalithi;
Izibonelo ezinemininingwane zokulawulwa kwekhwalithi:
(1) Qedela amafayela wokulawulwa kwekhwalithi nempendulo yekhwalithi;
(2) Ukuhlolwa okuqinile kwezingxenye zemishini yethu yokugaya, ukuqinisekisa imikhiqizo engenawo umonakalo futhi igweme
kudliwe ukugqwala nopende uyaxebuka kamuva.
(3) Kuzohlanganiswa kuphela izingxenye ezifanelekayo futhi imishini ephelele kufanele ihlolwe ngokuphelele ngaphambi kokudayiswa.
Phezu kokuqinisekiswa kokuthengisa, sizonikezela ngezinsizakalo zobuchwepheshe ezilandelayo:
1. Idizayini yokugeleza kolayini wakho nokwakheka kwemishini, mahhala;
2. Nikeza ngemidwebo eyisisekelo yamatshe agaywayo agaywe ngamakhasimende nemidwebo yezingxenye ezihlobene, njll;
3. Kuzohlinzekwa ngamapharamitha obuchwepheshe bemishini yokusebenza
4. Iziphakamiso zamahhala zokulungiswa kokuhlelwa kwemishini nokusetshenziswa kwayo;
5. Ukuthuthukiswa kwezinsiza kusebenza (amakhasimende kudingeka akhokhe izindleko);
1. Sizothumela uchwepheshe wethu kusayithi ukuze aqondise ukufakwa kwemishini nokuthuma.
2. Ngesikhathi sokufakwa nokuthunyelwa, sinikeza insizakalo yokuqeqesha opharetha.
3. Usuku lokuqinisekiswa kwekhwalithi unyaka owodwa ngemuva kokuthunyelwa. Futhi ngemuva kwalokho, sizoqoqa izindleko uma sihlinzeka ngokulungiswa kwemishini yakho.
4. Ukulungiswa kokuhluleka kwemishini okubangelwe ukuphatha okungafanele (kuzoqoqwa izindleko ezifanele).
5. Sinikeza izingxenye ngenani elihle nokugcinwa okungapheli.
6. Uma ukulungiswa kwemishini kuyadingeka ngemuva kokuphela kosuku lokuqinisekisa ikhwalithi, sizoqoqa izindleko zokuyigcina.
Langaphambilini Lab-ukusetshenziswa Disc-uhlobo jet isigayo QDB-50 QDB-100 QDB-150
Olandelayo: Imboni Yebhethri Nokunye Ukusetshenziswa Kwamakhemikhali Okusebenzisa iJet Mill
Uhlelo lwe-Nitrogen Protection Jet Mill lwe-Special ...
Imboni Yebhethri Nezinye Izinto Zamakhemikhali Us ...
Ukusetshenziswa Okukhethekile Kwe-Fluidized-bed Jet Mill Ku-High H ...
Whatsapp / Wechat / Ucingo: